-Resort Sielawa - izindlu ngasechibini
Chrzypsko Wielkie, wielkopolskie, Poland
Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguDorota
Siyakumema kwi-Wielkopolska, kwiSithili seLake saseMiędzychód-Sieraków, kwindawo yezokhenketho eyaziwa ngokuba yi "Land of 100 Lakes". Iziko lethu lezoLonwabo laseSielawa limi kwelinye lamachibi, iLake Chrzypskie.
Ukufikelela ngokuthe ngqo kwiLake Chrzypskie kunye nommandla weehektare ezingama-304 kuvumela ukuphumla okulungileyo kunye nethuba lokusebenzisa izixhobo zamanzi. Amanzi acocekileyo echibini akumema ukuba uqubhe. Umtsalane wemihla ngemihla unokuphela ngokubamba inyama okanye isidlo kunye negitare emlilweni.
Sinikezela ngezindlu ezikumgangatho omnye, zokhuni, ezi-4 kunye nabantu aba-5 zasehlotyeni ezinommandla we-30 m2, kunye ne-10 m2 ye-terrace enophahla kakhulu.
Ezi zindlu zinamagumbi okulala amabini aneebhedi ezimbini okanye ezintathu umntu ngamnye, igumbi lokuhlala elinekhitshi kunye negumbi lokuhlambela (indlu yangasese, isitya sokuhlambela, ikhabhathi yeshawari). Ukungena kwigumbi lokuhlambela ukusuka kwigumbi elinye lokulala.
I-kitchenette kwi-cottage nganye ixhotyiswe ngeketile, isitofu, ifriji kunye nezitya.
I-cottage inerediyo, iTV kunye nokufikelela kwi-intanethi.
Kukho ifenitshala yegadi kwi-terrace.
Izinto ezinomtsalane kwindawo:
-Ibala lokudlala labantwana,
-indawo eyenzelwe umlilo ovuthayo (nceda incwadi),
-isidlo se-altana sabantu abangama-50 (ugcino lufunwa umrhumo owongezelelweyo),
-ukwazi ukubamba i-grill kufuphi nendlu;
-ukuloba kwi-pier kunye nesikhephe,
- ulwandle olunesanti kunye nendawo yokuhlambela,
-izixhobo zemidlalo: ii-kayaks, ii-pedal boats, izikhephe, iibhayisekile ezingekho endleleni.
Indawo ekuchithelwa kuyo iiholide inazo zonke iingenelo zokuphumla ngoxolo kwindawo ekufutshane nendalo (amanzi acocekileyo, umoya omtsha, amadlelo kunye namahlathi).
Umhlaba ohlukeneyo ukhuthaza ukuhamba kunye nohambo lwebhayisekile, amahlathi amakhowa okukha amakhowa. Abathandi beentaka banokubukela imihlambi yee-cormorants kwisiqithi sabo.
I-Anglers inokuloba zombini kwi-pier kunye nesikhephe.
Kwiikhilomitha ezili-10 kukho iindawo zokutyela ezininzi ezifumaneka emoyeni.
Umbuki zindwendwe ngu- Dorota
Kukho umntu oza kukunceda imini yonke.